China LEDD730740 Ceiling LED Dual Head Chiremba Chekuvhiya Mwenje neakakwirira mheni Simba vagadziri nevatengesi | Wanyu
LEDD730740 Ceiling LED Dual Head Chiremba Chiremba Kuvhenekesa Mwenje ine yakakwira mheni Simba
LEDD730740 inoreva mbiri petal mhando yekurapa yekuvhiya mwenje.
Yekushandisa kamuri ine bhokisi rekuchenesa, iyo petal mhando inogona kudzivirira kudzikamisa kuyerera kwemhepo uye inoderedza zvakanyanya nzvimbo dzekusagadzikana mune laminar mweya kuyerera. LEDD730740 mbiri yekurapa mwenje yekuvhiya inopa hukuru hwekuvhenekera hwe150,000lux uye hukuru huturu tembiricha ye5000K uye max CRI ye95. Ma parameter ese anogadziriswa mumatanho gumi paLCD touch screen control panel. Mubato unogadzirwa nezvinhu zvitsva, zvinodzivirira kupisa kwakanyanya uye kumanikidza kwakanyanya. Ipa matatu echirimo maoko, akadhura, anodhura, anodhura-magumo.
Zvipatara zvakazvimirira uye zveruzhinji, maLabhoritari, makiriniki, nezvimwe.
1. Inoenderana neLaminar Kuyerera Kuyerera
Iyo petal mhando yekurapa yekuvhiya mwenje inogona kudzivirira kudzikamisa kuyerera kwemhepo uye inoderedza zvakanyanya nzvimbo dzemhirizhonga mune laminar mweya kuyerera.
Chiremba wechiremba anovhiya mwenje yakanyatso kuvharwa dhizaini. Inobata mubato inoshingirira kune yakanyanya tembiricha uye yakanyanya kumanikidza, inonyatso kusangana nezvinodiwa zvezuva nezuva zvekuuraya utachiona.
2. Yakavhenganiswa Ichena uye Yera Chiedza
Kushandisa machena uye machena mwenje mabumba, yakavhenganiswa mwenje, inowedzera tembiricha tembiricha uye ruvara kupa indekisi, uye inobatsira vanachiremba kusiyanisa pakati peropa nematukisi.
3. Kujekesa Kwakadzika
Chiedza chekuvhiya chekurapa chine kuora kwechiedza kweanosvika 90% pazasi pebasa rekuvhiya, saka mwenje wakakwirira unodiwa kuti uve nechokwadi chekuvhenekera kwakatsiga. Iyi mwenje yekurapa yekuvhiya miviri inogona kupa kusvika ku150,000 kuvhenekera uye kusvika kusvika 1400mm kujekesa kudzika.
4. Smart Kugadziridza Sisitimu
Iyo tembiricha tembiricha, mwenje kusimba uye ruvara kupa indekisi yemushonga wekuvhiya mwenje inogona kuchinjwa zvakaenderana kuburikidza neLCD control panel.
5. Yakavimbika Shanduko Yesimba Magetsi
Simba rekuchinja rine zita rinozivikanwa pasi rese rinoshanda mushe mu AC 110V-250V. Kune nzvimbo dzine magetsi asina kugadzikana, isu tinopawo zvimwe sarudzo zvine simba rekurwisa kupindira.
6. Zvingakudetsera zvishongedzo Sarudzo
Kune iyi ruoko ruviri rwekurapa kwechiedza chekuvhiya, inowanikwa nemadziro ekudzora, kure kure uye bhatiri back-up system.
Pashure: LEDD740 Ceiling Mount LED Imwe Musoro OT Mwenje neRemote Control
Zvadaro: LEDD620620 Ceiling LED Dual Dome Medical Inoshanda Chiedza neWall Kudzora
DL700 Halogen Nhare Inoshanda Operating Theatre Mwenje ...
LED D740 Ceiling Mount LED Imwe Musoro OT Chiedza wit ...
LEDB740 Wall Mount akatungamira Operating Theatre Mwenje ...
LEDL740 LED isina mumvuri Inofambiswa OT Chiedza neB ...